All HTC smartphones adaa n'ime ahịa na a wuru na HTC mmekọrịta njikwa na-enyere gị ka mmekọrịta data n'etiti na kọmputa na HTC smartphone. The ụbọchị ụdị na i nwere ike mmekọrịta na-agụnye ozi, photos, videos, na kọntaktị na ndị ọzọ nile inweta faịlụ. The HTC mmekọrịta njikwa bụ n'ozuzu bara uru software n'ihi gị, ma o nwere ụfọdụ drawbacks kwa. Nke mbụ adịghị mma azụ bụ ya mgbagwoju ọrụ interface na mgbe mgbe confuses gị.
Ruru ya na-abụghị ọrụ enyi na enyi uwa, i nwere ike ịmalite enyocha uzo ozo ka a HTC mmekọrịta faili. Ihe mere ndị dị otú ahụ searches bụ na mbụ HTC mmekọrịta njikwa jupụtara glitches na awade a siri ike oge jikwaa HTC smartphone. Eburu n'uche dị otú ahụ a obosara ina nke HTC mmekọrịta njikwa uzo ozo, dị iche iche mmepe mepụtara dị iche iche HTC mmekọrịta njikwa ọzọ software nke na-enye ihe a pụrụ ịdabere na-eji ire ụtọ mmekọrịta ahụmahụ gị. Na nke a post, anyị na-aga depụta si kasị mma 5 HTC mmekọrịta njikwa uzo ozo na ibenata ha a ma ama atụmatụ.
Part 1. Top 5 Alternatives ka HTC mmekọrịta (Manager)
1. Wondershare Mobile Go maka Android 719Kb $39.95
2. My ekwentị Explorer 7.1 Mb Free
3. Ugboro abụọ ighikota 21.1 Mb Free
1. Wondershare Mobile Go maka Android
Wondershare Mobile Go maka Android (http://www.wondershare.com/android-manager/) (N'ihi na Win) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) (http://www.wondershare.com/mac-android-manager/) bụ ihe kasị mma HTX mmekọrịta njikwa nnọchi na onye ọ bụla na-agafe n'ụbọchị n'ihi na nke ukwuu ọrụ-enyi na enyi interface na-akparaghị ókè, ohere nke ịgagharị gị HTC Android ekwentị. Ọ na-enyere ị jikwaa ọdịnaya ekwentị dị ka ngwa ọdịnala, akwụkwọ, ozi, kọntaktị, music, videos na ịmepụta ndabere nke ihe niile dị ole na ole sekọnd.
Dị nnọọ-na na na zuru ike n'ihi na ugbu a, ị nwere ike ịrụ ọrụ gị HTC Android ngwaọrụ (n'agbanyeghị nke nlereanya) na nke a dị ịtụnanya mmekọrịta njikwa na ike ndabere gị niile bara uru data na oké nche. Ị nwere ike ịkekọrịta videos, songs, photos, ngwa, ozi, kọntaktị na ndị ọzọ na stof n'etiti gị na kọmputa gị HTC Android ekwentị. Ọ bụ dakọtara na Windows na Mac nsụgharị. Nke a software zuru okè maka HTC mobile geeks ndị hụrụ na-ya nile stof ọma haziri
The isi atụmatụ nke Wondershare Mobile Go maka Android agụnye:
Ndabere ngwa, ngwa data, photos, videos, ozi, music, kọntaktị, kalenda, oku na ndekọ, na ha nwere ike mfe-eweghachi ma ọ bụrụ na-efu.
Anata na zipu ederede ozi nri site na kọmputa gị ozugbo.
Download / wụnye / uninstall / òkè ngwa ọdịnala na gị HTC ekwentị.
Tọghata ọ bụla kedi music na video na mbubata iTunes music na ya.
Mmekọrịta gị na kọntaktị na Outlook, Windows Live Mail, na Windows Address Book na oké ala.
Arụ ọrụ nke ọma na HTC, Samsung, Sony, Motorola, Google, ZTE, Huawei, na ndị ọzọ.
Dị nnọọ ka aha-atụ aro, MyPhoneExplorer (http://www.fjsoft.at/en/downloads.php) bụ a zuru okè HTC mmekọrịta Manager nnọchi inyocha gị HTC ekwentị na ndabere gị niile dị mkpa data na sekọnd ole na ole. Ọ na-enyere gị iji nweta kọntaktị niile na-azọpụta ha ka ha MS Outlook akaụntụ, jikwaa ozi, na-achịkwa nke ọdịnaya na gallery na nkwado ndabere nile data maka mgbe e mesịrị ojiji. Ịtụnanya banyere ihe a bara uru HTC mmekọrịta njikwa nnọchi bụ na ị nwere ike iji ya dị ka obere mkpanaaka ngwa. Dị nnọọ echekwa ya n'ime gị USB na ngwaọrụ ma na-ebu ya n'ebe ọ bụla ị na-aga. MyPhoneExplorer bụ a eluigwe na ala HTC mmekọrịta Manager nnọchi na-arụ ọrụ na ihe karịrị 700 Android ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Ọ bụ a ibu-ngwa ngwa media njikwa na-enyere gị ike ndabere nile media faịlụ ka PC. Ị nwere ike mfe agbanweta data n'etiti gị na PC na HTC Android ngwaọrụ site na iji bara uru ngwá ọrụ.
Key atụmatụ nke My ekwentị Explorer agụnye:
Adreesị akwụkwọ na-enyere gị aka kpọmkwem mmekọrịta gị niile kọntaktị na Gmail, Outlook na ndị ọzọ isi mail nyiwe.
Ọhazi na kalenda ele.
SMS Archive mbubata / mbupụ nhọrọ.
Kpọọ anatara / Profaịlụ edits / ekwentị akpọchi na nza nke ọzọ stof.
Dị maka Windows / Mac.
doubleTwist (https://www.doubletwist.com/desktop/), A dị ike na superfast HTC mmekọrịta Manager ngwá ọrụ na-enyere gị ka mmekọrịta music, video na foto mfe. doubleTwist-enyere gị jikọọ ma jikwaa HTC ngwaọrụ site na iji WiFi ma ọ bụ eriri USB. doubleTwist mmekọrịta njikwa bụ ịrịba dị ka ọ na-enye MTP nkwado maka HTC na ngwaọrụ na adịghị akwado eriri USB. The interface nke mmekọrịta njikwa bụ nnọọ mfe iji na ị chọrọ dịghị otú ahụ ike ọzụzụ tupu ha amalite iji a dị ịtụnanya PC ngwa.
Key atụmatụ nke doubleTwist agụnye:
Jikọọ gị HTC ngwaọrụ site na WiFi ma ọ bụ eriri USB.
Mmekọrịta niile mgbasa ozi, foto na kọntaktị n'etiti gị HTC Android ekwentị na PC
Nnọọ mfe ma dị mfe iji interface
Ìhè arọ ngwa n'ihi na PC
Complete ohere mobile ọdịnaya
MoboRobo (http://www.moborobo.com/) bụ ihe nile-na-otu HTC mmekọrịta Manager ọzọ na nza nke ịtụnanya atụmatụ. The mmekọrịta ngwaọrụ bụghị naanị na-enye gị ohere ịkọrọ faịlụ n'etiti gị na PC na HTC ngwaọrụ ma na-enyere gị download niile ọkacha mmasị gị ụdaolu na akwụkwọ ahụ aja site na iji gị PC enweghị ihe ọ bụla data ebubo. The interface nke MoboRobo smartphone ọrụ bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi na ọ na-enye gị adịghị agwụ agwụ customization ohere. MoboRobo na-enye gị a ngwa ngwa na a pụrụ ịdabere na data ndabere usoro na nke ị nwere ike ndabere gị niile dị mkpa data gụnyere music, foto, vidiyo, ozi na ndị ọzọ. Niile ndabere faịlụ nwere ike mfe a ga-enweta site na iji ọzọ management ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji ya ederede ozi na ndị enyi gị site na gị PC. Dị nnọọ jikọọ gị HTC ngwaọrụ gị na PC na mgbe ahụ na-amalite na izipụ na inweta odide na gị na desktọọpụ ihuenyo.
MoboRobo isi atụmatụ na-agụnye:
Unlimited ịnweta niile data n'ime gị HTC ngwaọrụ.
Mmekọrịta na ndabere gị niile foto, videos, songs na mgbasa ozi faịlụ nke ụdị ọ bụla
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface
Ohere kọntaktị na ndepụta na ozi
Gam akporo na iPhone kọntaktị transfer owuwu
Online ederede ozi atụmatụ.
Dakọtara na niile isi sistem
AirDroid (http://www.airdroid.com/) bụ ihe ọzọ dị mfe ma fun HTC mmekọrịta njikwa ọzọ na awade-adịghị agwụ agwụ management ngwaọrụ gị. AirDroid bụ ike management ngwá ọrụ n'ihi na ị na manag HTC ngwaọrụ site na website. Ọ na-enye gị nza nke stof gụnyere nkwado ndabere na mpaghara mmekọrịta nke gị niile dị mkpa data, dị ka mgbasa ozi faịlụ, kọntaktị na ozi. Ịtụnanya AirDroid awade na gị na ohere eziga na-enweta SMS na gị na desktọọpụ ihuenyo mgbe eji gị HTC ekwentị ụgbọelu. Otu ịrịba ihe na-abịa na nke a mmekọrịta ngwaọrụ bụ na ọ na-enyere gị soro HTC ngwaọrụ ma hichapụ niile data na ya remotely site na iji ngwá ọrụ a. Ha nwekwara ike na-na foto nke ohi bụ ndị nwara Ị kpọghee ekwt HTC ekwentị. Ọzọkwa, ị nwere ike ijikwa gị niile Android ngwa ọdịnala na egwu na a dị ịtụnanya Android mmekọrịta njikwa na ime mgbanwe enweghị ihe ọ bụla mgbochi.
Key atụmatụ nke AirDroid agụnye:
Desktọpụ SMS Utility
Mmekọrịta niile data gụnyere media faịlụ, ozi, na kọntaktị
Share data n'etiti PC na gam akporo ngwaọrụ
Mepụta ndabere nke data maka mgbe e mesịrị na-eweghachiri
Ekwentị mkpanaaka tracker.
Mobile ngwa management ịba uru
Part 2. Tụlee 5 Alternatives ka HTC mmekọrịta Manager
Wondershare Mobile Go maka Android
Data ndabere na mgbake Ee Ee Ee Ee Ee
Data mmekọrịta Ee Ee Ee Ee Ee
Media faịlụ ohere Ee Ee Ee Ee Ee
Ngwa management Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ee
Cross OS ndakọrịta Ee Ee Ee Ee Ee
Dual Njikọta (WiFi / USB) WiFi + USB USB WiFi + USB USB USB
Ekwentị mkpanaaka tracker Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị Ee
Desktọpụ SMS ịba uru Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ee Ee
Portable App Ee Ee Ọ dịghị Ọ dịghị Ọ dịghị
Top 9 ekwentị Nyefee Software
Top 10 Android Desktọpụ Managers: Jikwaa ekwentị na PC ma ọ bụ Jikwaa PC na ekwentị
Nyefee Data ka New akporo ekwentị na Otu Click
Olee otú Naghachi ehichapụ Kọntaktị na HTC Wildfire
Android ihuenyo Capture: 1 Pịa eme ihuenyo Capture on Android
> Resource> Android> Best 5 HTC mmekọrịta Manager Alternatives